My freedom: Facial Masks Guide
ဒီနေ့ရေးမယ့် Beauty Post ကတော့ Face Mask တွေအကြောင်း... ဘယ်အလှကုန်ဆိုင်သွားသွား တံဆိပ်ပေါင်းစုံ၊ အမျိုးအစားပေါင်းစုံတဲ့ Face Mask တွေကို တွေ့ရတယ်လေ။ တခါတလေ အမျိုးအစားတွေက များလွန်းတော့ ဘာကိုရွေးဝယ်ရမလဲဆိုပြီး ဦးနှောက်ခြောက်ရတာလည်း တဒုက္ခမလား... အဲ့တော့ အသားအရေအမျိုးအစားအလိုက် (သို့) ကိုယ့်လိုအပ်ချက်အလိုက် ဘယ်လို Face Mask မျိုးကို သုံးသင့်လဲဆိုတာ ဒီနေ့ပြောပြမယ်နော်...
Face Mask သုံးတယ်ဆိုတာ မျက်နှာအသားအရေကို Treatment လုပ်တဲ့သဘောပါပဲ။ နေ့စဉ်အသားအရေအစိုဓာတ်ထိန်းတဲ့ Moisturizer လိမ်းသလိုပေါ့။ တစ်ပတ်တစ်ခါ Face Mask သုံးပြီး ကိုယ့်အသားအရေကို ဂရုစိုက်သင့်ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်က အပျင်းတစ်ပြီး သိပ်မလုပ်ဖြစ်ပေမယ့် သူများကိုတော့ လှစေချင်လွန်းလို့ ကိုယ်ပြောသလိုလုပ် ကိုယ်လုပ်သလိုမလုပ်နဲ့ဆိုတဲ့နည်းနဲ့ အကြံပေးတာ ဟဟ xD
Face Mask တွေထဲမှာ Gel အမျိုးအစားတွေ၊ ပြီးရင် ပြန်ခွာရတဲ့ Peel off Mask တွေ၊ ဆဲလ်အသေတွေကို ဖယ်ရှားပေးတဲ့ Exfoliating Mask တွေ၊ Clay Mask တွေနဲ့ Sheet Mask တွေဆိုပြီး အမျိုးအစားအများကြီး ရှိတယ်နော်။ ဒီနေ့အဲ့ဒါတွေတစ်ခုချင်းစီ ပြောမနေတော့ဘဲ ကိုယ့်အသားအရေအမျိုးအစားအလိုက် သုံးသင့်တဲ့ Mask တွေအကြောင်းပဲ ပြောပြသွားမယ်။
Face Mask တွေရဲ့ အသုံးဝင်ပုံပေါ်မူတည်ပြီး အမျိုးအစားခွဲလိုက်မယ်ဆို (၃)မျိုးခွဲခြားလို့ရပါတယ်...
၁) ၀က်ခြံပေါက်တတ်တဲ့ အသားအရေပိုင်ရှင်တွေအတွက် Exfoliating Mask (or) Purifying Acne Mask
၂) ညစ်နွမ်းတဲ့အသားအရေပိုင်ရှင်တွေအတွက် Whitening (or) Brightening Mask
၃) အရေးအကြောင်းတွေလျော့နည်းစေဖို့အတွက် Anti-aging (or) Hydrating Mask
1) Exfoliating Mask (or) Purifying Acne Mask
၀က်ခြံပေါက်တတ်တဲ့ အသားအရေပိုင်ရှင်တွေအတွက် Clay Mask တွေက အသင့်တော်ဆုံးပေါ့။ Clay Mask တွေက မျက်နှာပေါ်မှာရှိတဲ့ အပေါက်ငယ်လေးတွေထဲက အဆိပ်အတောက်တွေ၊ အညစ်အကြေးတွေကို သန့်စင်ပေးမယ်။ သတိထားရမှာက တခါတလေ Clay Mask သုံးပြီးမှ ၀က်ခြံလေးတွေ ထွက်လာတတ်တယ်။ အဲ့ဒါပုံမှန်ပါပဲ။ အညစ်အကြေးတွေကို ဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့ သဘောမို့ပါ။ Exfoliating Mask တွေကတော့ ဆဲလ်အသေတွေကို ဖယ်ရှားပေးပါတယ်။ အဓိကပါဝင်ပစ္စည်းတွေကတော့ Glycolic acid, Enzymes, Salicylic acid တွေပါ။
2) Whitening (or) Brightening Mask
သူကတော့ မျက်နှာပေါ်က အရောင်ဆဲလ်လေးတွေကို ဖြိုခွဲပြီး အသားအရေကြည်လင်လာအောင် လုပ်ပေးတာပါ။ နေလောင်ဒဏ်ကြောင့် ပေါ်လာတဲ့ အစက်အပြောက်တွေ၊ ၀က်ခြံပေါက်ပြီး ကျန်ခဲ့တဲ့ အမာရွတ်တွေကို ဖယ်ရှားဖို့ သင့်တော်ပါတယ်။ အဓိကပါဝင်ပစ္စည်းတွေကတော့ Vitamin C, Jasmine, Yeast တွေပါ။
3) Anti-aging (or) Hydrating Mask
လူ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ (၇၅)ရာခိုင်နှုန်းက ရေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတော့ အသားအရေကိုလည်း ရေဓာတ်ပြန်ဖြည့်တင်းပေးဖို့ လိုတယ်လေ။ နောက်ပြီး ခြောက်သွေ့တဲ့ အသားအရေပိုင်ရှင်တွေက အရေးအကြောင်းဖြစ်ဖို့ ပိုလွယ်ကူတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် Anti-aging (or) Hydration Mask တွေ ပိုအသုံးပြုသင့်တယ်။ အဓိကပါဝင်ပစ္စည်းတွေကတော့ Antioxidant, Hyaluronic acid, Vitamin E တွေပါ။
ပါဝင်ပစ္စည်းလေးတွေပြောပြရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ဘာအတွက် Face Mask ဆိုတာ မရေးထားခဲ့ရင် ပါဝင်ပစ္စည်းလေးတွေဖတ်ပြီး ဘာအမျိုးအစားလဲဆိုတာ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ခွဲခြားနိုင်အောင်လို့ပါ။ ကန်ဒီကတော့ ၀က်ခြံပေါက်တတ်တဲ့ အသားအရေပိုင်ရှင်ဆိုတော့ Clay Mask ကို တစ်ပတ်တစ်ခါသုံးဖြစ်အောင် ကြိုးစားပါတယ်။ တခြား Mask တွေကတော့ စိတ်ကူးပေါက်ရင် ပေါက်သလို၊ မပျင်းရင် မပျင်းသလို သုံးဖြစ်တယ်။ ကန်ဒီ့ Mask တွေက သူများလက်ဆောင်ပေးတာတွေချည်းပဲ(xD xD)။ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဝယ်တာဆိုလို့ ကန်ဒီ့ဆရာဝန်ဆီက Clay Mask ဗူးလေးတစ်ခုပဲရှိတယ်။ အဲ့ဒါကိုက ဓာတ်ပုံမရိုက်လိုက်ရဘူး။
သူများပေးတဲ့ Mask တွေထဲကကြိုက်တာပြောရရင် Innisfree ဆိုတဲ့ Korea Brand လေး ကြိုက်တယ်။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် Korea သွားလည်တုန်းက လက်ဆောင်ဝယ်လာပေးတာ။ စင်္ကာပူမှာလည်း ရှိတယ်ထင်တယ်။ Bugis Junction မှာ မြင်မိသလိုပဲ။ My Beauty Diary Mask လည်း ကြိုက်တယ်။ SK-II ကတော့ အကြိုက်ကြီးမဟုတ်ဘူး။
ဒီလောက်ဆို ကျေနပ်ကြမယ် ထင်ပါတယ်နော်...
You can find Innisfree in Takashimaya..
Thanks for the info!!! :D :D